WOT bụ aha gị? | Martech Zone
Saturday, July 9, 2011 Fraịdee, June 19, 2015 Douglas Karr
Ọ bụ ihe ijuanya na ọ nweghị ozi ọzọ banyere njikọ aka nke WOT na Facebook. WOT na-anọchi anya "Web of Trust" ma bụrụkwa saịtị ndị obodo wuru nke ndị ọrụ na-atụle weebụsaịtị.
Na Mee, Facebook malitere iji ọrụ ahụ dị ka nkịta ndị uwe ojii iji chebe ndị ọrụ ya site na ịpị site na saịtị ọjọọ. Da dị ka ezigbo Facebook na-agagharị n'elu, mana ihe na-akpata WOT bụ n'ezie ụjọ. Na saịtị ụfọdụ, WOT nwere ike ịkwado "Web Of Trolls". Otu okwu na ntanetị bụ saịtị nke ndị na-enye ọrụ Email.
Mailchimp na WOT:
Ngwa ngwa ngwa na WOT:
kọntaktị na WOT:
Mailchimp, Emailvision, Kpọtụrụ na Kpọmkwem Ngwaọrụ bụ 4 ndị na-enye ọrụ email dị iche iche mana ha niile na-arụsi ọrụ ike na azụmaahịa na-enye ikike, na-eme ka ndị ahịa ha gụọ akwụkwọ na iwu SPAM, ha niile na-arụkwa ọrụ mgbapụta nke na-ewulite mmekọrịta oge niile na ndị na-eweta ọrụ Internetntanetị. Ọ bụrụ na ha ekwe ka SPAM, ọnụọgụ ha na-agbada ma ọ ga-apụ na azụmaahịa ha. ESP na -ebi ma na-eku ume na ike ya iji nweta ozi ahụ na igbe mbata.
Enweghị m obi abụọ na ụfọdụ unsolicited email mere ya nke ọ bụla n'ime ndị a ESPs… ma m na-adịghị obi abụọ na ahịa na-akpata SPAM bụ ndụmọdụ ma ọ bụ ọbụna chụpụrụ si ụlọ ọrụ. Onye ọ bụla n’ime ndị ESP nwere ụkpụrụ nduzi siri ike nke ụlọ ọrụ ga-ekwenye. Kama ijide ndị ahịa ahụ, agbanyeghị, WOT na-emejọ isi mmalite nke izipu ozi site na adreesị IP ma tinye nkatọ ahụ na ESP, n'agbanyeghị agbanyeghị na obodo email. Ebe ọ bụ na WOT malitere dị ka saịtị Europe, saịtị na Europe na-atụle nke ukwuu karịa saịtị na North America.
Ihe nsonaazụ ndị a dara bụ na saịtị ndị a na-egbochi saịtị ụfọdụ mgbe ụfọdụ, dị ka Facebook, mgbe ndị ọrụ pịa njikọ mpụga. Cheedị na ị ga-efunahụ Facebook gị niile n'ihi ọkwa WOT na-ezighi ezi! Nke ahụ bụ nnukwu ọkpụrụkpụ n'oge a.
N'ụzọ na-emegide onwe ya, ụfọdụ porn saịtị nwere ọtụtụ ntụkwasị obi karịa ndị na-enye ọrụ email!
Ihe bụ nsogbu bụ na ọtụtụ mmadụ na-eche na amamihe dị n’etiti igwe mmadụ ma ọ nọrọ n'ezie enweghị ihe àmà dị otú ahụ. Imirikiti ìgwè mmadụ mejupụtara ndị na-amaghị aha ndị na-eso ụzọ na-amaghị aha ha na ụfọdụ ndị na-emetụta ya abụghị ndị ọkachamara n'okwu gbasara isiokwu ha na-atụle.
N'okwu a akọwapụtara, anyị na-ahụ na obodo WOT… ọtụtụ n'ime ha nwere ike ghara iji onye na-eweta ọrụ Email… na-eche na onye ọ bụla na-akwalite ọnụọgụ email bụ naanị spammer. Fim ndị a bụ ndị amaghi aha, agụghị nke ọma, ha anaghị enyekwa akaebe ọ bụla na isi iyi nke okwu aha bu onye na-enye Email Email na ajuju. E nweghị ụzọ na-ajụ a nyochaa maka ziri ezi ma ọ bụ ihe ọmụma… na e nweghị recourse maka ụlọ ọrụ ndị na-ada na ìgwè mmadụ ahụ.
Ọ bụrụ na anyị ga-ahapụ aha saịtị anyị gaa na amamihe nke igwe mmadụ ahụ, onye na-ahụ na igwe mmadụ ahụ gụrụ akwụkwọ ma mara ihe ọ na-eme? Ọ ga-abụ ihe ezi uche dị na ya karịa ka ndị ahịa e gosipụtara na saịtị na ọrụ ndị a nwee ike ịkwado onye na-ere ahịa karịa ndị bịara abịa na-agbaso amamihe nke igwe mmadu. Amaghị m na WOT bụ ezigbo ihe ngwọta maka Facebook ma ọ bụ ngwa ọ bụla iji mee ihe.
Ana m atụ anya ịhụ ka ọkwa m si metụta ntụkwasị obi ngalaba a! M tụkwasịrị obi na ọ gaghị adị mma.
Tags: Facebookahatụkwasị obiweebụ nke ntụkwasị obiwot
Web ntụkwasị obi
Jul 12, 2011 na 9:01 PM
A na-agụta aha saịtị site na ọkwa, ọ bụghị nkwupụta. Hapụ ikwu okwu bụ nhọrọ zuru oke, na ebe ọ bụ na ndị ọrụ na-ekwenyeghị na aha ọma nwekwara ike ide nkọwa, ọ bụghị ihe a na-ahụkarị ka okwu na-egosi na ọ na-emegide aha ahụ.
Aha njirimara nke mmadụ atọ n’ime ndị na-enye ọrụ email anọ ị rụtụrụ aka na ntinye gị dị mma ma ọ bụ magburu onwe ya. Biko lee akara ngosi:
Naanị nke nwere aha ọjọọ bụ nke a:
Dị ka aha anyị na-egosi, WOT bụ banyere ntụkwasị obi. Nchekwa teknụzụ nke weebụsaịtị bụ ihe dị mkpa mgbe ị na-achọpụta ntụkwasị obi ya. Agbanyeghị, ọ bụkwa ezigbo ihe kpatara iji kwado ogo saịtị ọfụma ma ọ bụrụ na ịtụkwasị obi na ọdịnaya ma ọ bụ nzukọ dị n'azụ weebụsaịtị, ma ọ bụ n'ọnọdụ ndị a, ọ bụrụ na ị nweta spam.
WOT ọma ratings bụ ndị ọrụ 'echiche nke onwe ha na ahụmịhe gbasara weebụsaịtị' ntụkwasị obi. Anyị kwenyere na ijikọta ọtụtụ echiche / ahụmịhe (aka Wisdom of the Crowds) na ozi anyị na-enweta site na isi mmalite anyị tụkwasịrị obi (phishing na malware blacklists, wdg) na-enye anyị ozi kachasị zie ezie banyere ntụkwasị obi webụsaịtị.
Ọ bụrụ na ị kwenyeghị na ọkwa, usoro kachasị dị irè bụ ịtụnye ya onwe gị ma tinye okwu na-akọwa ahụmịhe gị na saịtị ahụ.
Jul 14, 2011 na 10:53 PM
Echere m na ọ dị mma iche na ọ bụrụ na ndị mmadụ na-ewepụta oge ịza ajụjụ, ha na-emetakwa saịtị ahụ. Anaghị m ekwenye na gị gbasara ntụkwasị obi nke ọdịnaya ma ọ bụ nzukọ ahụ. Ekwenyeghị m na gị gbasara izi ezi nke saịtị gị. Mention na-akpọ SPAM, mana Emailvision na-adịghị mma bụ onye ndu mba ụwa na mgbapụta na ịbanye na, izipu ozi izizi dabere. Ebe nrụọrụ gị ezighi ezi.
Achọtara m ọzọ:
Webtrends bụ ụlọ ọrụ nyocha mbụ na thentanetị. Ihe nrịba ama nke saịtị gị na-ewe iwe n'ihi nyocha teknụzụ. Ihe na-eju anya bụ na saịtị gị na-eji Google Analytics - tracking visitors.
Ismgbaghasị nzaghachi a na naanị ịdụ ndị mmadụ ọdụ ka ha 'gaa nweta ọtụtụ ntụle' enweghị oke okwu dị mkpa ebe a. Companylọ ọrụ gị nwere ikike ịmetụta okporo ụzọ na-aga azụmaahịa ndị a - mana ị nweghị ụzọ ọ bụla maka azụmaahịa, iwu, ntụkwasị obi a tụkwasịrị obi iji nyochaa ma ọ bụ kpochapụ ọkwa ha adịghị mma.
Jul 14, 2011 na 11:41 PM
Enwere m mmasị na Web Of Trust, mana achọpụtara m otu ihe ahụ. Reviewsfọdụ nyocha, n'ezie ọtụtụ nyocha, dị ka nke ịgba onye ozi nke ọrụ ụfọdụ n'ihi ndị ọrụ nupụrụ isi na ileghara iwu na usoro ọrụ anya. M ka na-eji WOT, Ana m eji ya nnu nnu.
Sep 19, 2011 na 10: 03 AM
Nabata na oge ọhụụ nke ịchụ nta dijitalụ.
Ọ bụrụ na ìgwè mmadụ ahụ maara ihe, anyị agaghị achọ gọọmentị ka ha mee mkpebi maka anyị niile.
N'ezie, ọ naghị eju m anya na enweghị mgbasa ozi ọzọ banyere azụmahịa n'etiti Web Of Trust na Facebook n'ihi na ọ ga-ekpughere sistemụ Web Of Trust na nyocha nke ndị maara ihe. Ma ọ gaghị ewe nnukwu oge iji kpughee ọtụtụ ntụpọ nke sistemụ ha na enweghị ntụkwasị obi nke ọkwa ha.
Ọ bụrụ n’ị nwere mmasị ịmụtakwu gbasara Web Of Trust, a na m akpọ gị oku ka ị gụọ nyocha miri emi nke m dere: MYWOT Web Of Trust Review: Modern Web Totalitarism
Oge eruola ikpughe eziokwu na-esi ísì ụtọ n'azụ MyWot…
Doug, emere m ule na blọọgụ m. Ebe nrụọrụ m nwere ọkwa dị mma tupu m nyefee ya maka nyocha. Na mberede na trolls ahụ gara ọrụ ma gosipụta ihe na-adịghị mma. Edere m akwụkwọ banyere ya ka ị wee nwee mmasị:
Amaghị m ihe kpatara Facebook ji soro ha mee ihe. Enwere ike igbanye aha ha na egosiri m ya na post m. Ha na-ebibi aha ọma nke ndị na-ede blọgụ ziri ezi na azụmaahịa ndị dị n'ịntanetị, wee pụọ na ya. Ha na-agba ume inye ọkwa na-adịghị mma n'ihi na ọ na-enyere ha aka itolite isi ọrụ ha. WOT na-eji arụmụka iji nweta ọtụtụ ndị ọrụ ọhụụ dị ka o kwere mee.
Deborah na-aga ma na-agwa onye ọ bụla ka ọ kwado saịtị ahụ n'onwe gị, ma ọ bụ mee ka ndị ọzọ kwuo ya. Nke ahụ ziri ezi n’ebe ahụ na-ekpughe ezi ebumnuche ha.
Mee 18, 2012 na 10: 45 AM
Ọtụtụ ndị nwere nkụda mmụọ si n'ebe ahụ bụ ndị
amaghi ihe a ga eme ihe ojoo ojoo mywot na enye ha.
Lee ụfọdụ ndị na-achọ ime ụfọdụ gbasara ya -
Jun 28, 2013 na 8:49 AM
MyWOT na - akpachapụ anya na azụmahịa site na ebe ọ bụla
aha. 90% nke ogo a yiri ka ọ bụ otu ndị ọrụ na-eme.
Ihe ha kwuru dị ka ndebiri na nke kachasị njọ. Ha na-ekwu na
ọnụego na-eme dabere na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke votu mana nke ahụ bụ ezigbo ụgha.
Ndị ọrụ ọrụ nyere ikike dị elu karịa onye ọrụ nkịtị. Ya mere, ka anyị
mee ụfọdụ ndị ọrụ ebe ahụ ma kwuo ruo mgbe anyị ji ike rụọ ọrụ yana Voilaaa, anyị
nwere ike imebi aha onye ọ bụla. Oh ee, ọ bụrụ na ha akwụ anyị ụgwọ, anyị na-ewepu nke anyị
ọjọọ fim. Ezigbo azụmahịa ọ bụghị ya?
Echere m na ndị geeks nwere ike ịme ọtụtụ ego na MyWOT (Web nke SCAM).
Jul 1, 2013 na 5:31 PM
Ekwenyere m @spot_mark: ajuju, enweghị rhyme ma ọ bụ ihe kpatara usoro sistemụ ha.